lymphatic drain ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ၎င်းအတွက်ဘာအတွက်လဲ။ Bezzia
lymphatic drain ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ၎င်းအတွက်ဘာအတွက်လဲ။
တောရက်စ် | 08/09/2021 23:55 | ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
Lymphatic drain သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှသွေးလည်ပတ်မှုပြွန်များမှတစ်ဆင့် lymph များလည်ပတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်အိမ်တွင်းကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်တိကျသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နှိပ်နယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည် ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းကိုအထူးပြုသူတစ် ဦး ဦး ပြုလုပ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ lymphatic အရည်ဆင်းခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလှအပကုထုံးများနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်းဤကုထုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာများပြားသည်။
အနုအရင့်အဆင့်တွင် lymphatic အရည်များထွက်ခြင်းကြောင့်ပေါင်၊ တင်ပါးသို့မဟုတ်ဝမ်းဗိုက်ကဲ့သို့စင်တီမီတာများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် cellulite ကိုကုသရာတွင်အလွန်ထိရောက်မှုရှိပြီးလိမ္မော်ခွံအရေပြား၏အသွင်အပြင်ကိုများစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း, ၎င်းသည်အခြားကျန်းမာရေးပြသနာများအတွက်အလွန်ထိရောက်သောကုထုံးဖြစ်သည် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့အခြားအရာများ
lymphatic drain အကြောင်းပိုမိုသိလို။ ဤအနုပညာကုသမှု၏အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုရှာဖွေလိုလျှင်၊ ငါတို့အောက်ကအရာအားလုံးကိုမင်းကိုပြောလိမ့်မယ်.
1 lymphatic အရည်ထွက်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
lymphatic system သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံအတွင်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြား၌တွေ့ရသောပြွန်များဖြစ်ပြီးသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အပြိုင်စီးဆင်းသည်။ Lymph ကို lymphatic system ၏ပြွန်များမှတဆင့်ဖြန့်ဝေသည်၊ ၎င်းသည်ကြည်လင်ပြီးပွင့်လင်းသောအရည်ဖြစ်သည် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝှမ်းရှိအမျိုးမျိုးသောမော်လီကျူးများကိုခန္ဓာကိုယ်၏ဆဲလ်များသို့သယ်ဆောင်သည်.
lymphatic system မှတဆင့် lymph လည်ပတ်မှုမအောင်မြင်ပါက၎င်းသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာတွင်သွေးခဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖောခြင်းနှင့်အစရှိသောပုံမှန်တွေ့ရှိရပါသည် cellulite၎င်းသည် lymph ဆဲလ်များလည်ပတ်မှုအားနည်းသောကြောင့်အရေပြားတောင့်များတွင်အဆီစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ Lymphatic drain သည်ဤပြသနာကိုကုသရာတွင်အလွန်ထိရောက်သောကုထုံးဖြစ်သည်၎င်းကို lymphatic system မှတဆင့်လည်ပတ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်တိကျသောရစ်သမ်နှင့်ပြင်းထန်မှုဖြင့်နှိပ်နယ်ခြင်းဖြင့်ကုသသည်။
၎င်းတို့တွင်တိကျသောအင်အား၊ ဖိအားနှင့်ပြင်းထန်မှုရှိရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤအနှိပ်များသည်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုပြုလုပ်ရမည်။ ဆိုးရွားသောကုသမှုသည်မထိရောက်နိုင်ပါ မမှန်ကန်သောစီးပွားရေးအသုံးစရိတ် ထို့ပြင်၊ ဤအရာအတွက်အဆက်မပြတ်နှိပ်နယ်မှုညံ့ဖျင်းစွာလုပ်ခြင်းသည်အမာရွတ်များနှင့်အခြားပြင်းထန်သောပြဿနာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် lymphatic drain ကဲ့သို့သောအနုပညာကုသမှုမစတင်မီအကြံဥာဏ်ကောင်းများရယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
lymphatic ရေနုတ်မြောင်းများသည်အလှအပနှင့်အလှအပနယ်ပယ်ကိုအခြေခံအားဖြင့်အာရုံစိုက်နေသော်လည်းဤကုထုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် ဆရာဝန်တွေကကျန်းမာရေးနယ်ပယ်ကိုပိုပိုပြီးလွှဲပေးတယ်မရ။ အထူးသဖြင့်ကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရသူများအနေနှင့်၊ ဆေးရုံများစွာရှိကင်ဆာအထပ်များတွင် lymphatic ရေဆင်းကုထုံးကိုရှာခြင်းသည်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ရောဂါများနှင့်ကျန်းမာရေးပြသနာများကိုကုသရာတွင်လည်းထိရောက်မှုရှိသည်။
လူတွေ fibromyalgia ကဲ့သို့ကြွက်သားရောဂါများ အဆစ်နာသို့မဟုတ် osteoarthritis ကဲ့သို့အဆစ်များနှင့်
Lymphatic drain များသည်လည်းeဖြစ်သည်ဝက်ခြံကုသခြင်းကိုထိရောက်စေသည် နှင့်အရေပြားပြဿနာများ။
varicose veins ဆန့်ကျင်၊ ၎င်းသည်သွေးကြောများမှတစ်ဆင့်သွေးလည်ပတ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းမှထုတ်လုပ်သည်။
မသန်စွမ်း ခြေထောက်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချပါ အရည်ထိန်းထားသည့်လူနာများတွင်
သွေးလည်ပတ်မှုမကောင်းသောကြောင့်ဖောရောင်ခြင်းကိုကုသပါ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်နေရသူကဲ့သို့အချိန်ကြာမြင့်စွာအနားယူရမည့်လူနာများတွင် ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သွေးလည်ပတ်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်အရည်များဆက်လက်ထိန်းထားသည့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိစ္စတွင်
အတိုချုပ်အားဖြင့် lymphatic drain သည်အခြားအခြေအနေများစွာအတွက်ထိရောက်သောဗေဒကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှိပ်နယ်ခြင်းကိုသင့်တော်သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့်ပြုလုပ်လျှင်ရလဒ်သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုတွေရှိဖို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ် lymphatic system ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိတဲ့လူတစ်ယောက်မရ။ မဟုတ်ရင်စွန့်စားရမှုတွေကအကျိုးအမြတ်ထက်ပိုများနိုင်တယ်။ ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှအကြံဥာဏ်ကို ရယူ၍ အလားတူကုသမှုမျိုးမစတင်မီအကြံဥာဏ်ရယူပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ » lymphatic drain ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ၎င်းအတွက်ဘာအတွက်လဲ။
နွေရာသီအဝတ်အစားများနှင့်ဖိနပ်များသိုလှောင်ရန်အချက် ၅ ချက်